Conte oo ka codsaday maamulka Inter inay sameeyaan saxiixyada laba xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
Conte oo ka codsaday maamulka Inter inay sameeyaan saxiixyada laba xiddig ka tirsan Barcelona
(Italy) 02 Agoosto 2019. War saxaafadeed ka soo baxay talyaaniga ayaa shaaca looga qaaday in Inter Milan ay qorsheyneyso inay la soo saxiixato ciyaartoy ka tirsan kooxda Barcelona inta lagu gudajiro suuqan xagaagan.
Sida laga soo xigtay wargeyska reer Talyaani ee “Tuttosport”, tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa wuxuu codsaday in loo sameeyo saxiixyada xiddigaha khadka dhexe ee Barcelona Arturo Vidal iyo Ivan Rakitić, si uu ugu buuxsdo safka Nerazzurri.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Ivan Rakitić la heli karo inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, isla markaana ay suurtogal tahay inuu ka jawaabo xiisaha kaga imaanaya kooxda Inter Milan, si uu u tijaabiyo loolan cusub ee dalka Talyaaniga ah xilli ciyaareedka soo socda.
Arturo Vidal ayaa dhankiisa horey kala soo shaqeeyay Antonio Conte kooxda Juventus, laakiin tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa la dhacsan qaab dhismeedka jir ahaaneed ee ciyaaryahanka reer Chile, waxaana laga yaabaa inuu kusii hayo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedka cusub.
Inter Milan ayaa u baahan inay iska iibiso wax ka badan hal ciyaaryahan si ay u soo xero galiso labada ciyaaryahan ee kooxda Barcelona, Nerazzurri ayaana diyaar u ah inay ka maaranto adeegyada xiddigaha Radja Nainggolan, João Mário iyo sidoo kale Mauro Icardi.
Maxaa ka dhacay Kuuriyada koonfureed markii Cristiano Ronaldo uu tagay oo uu ciyaari waayey?
“Paris St Germain ma rabto inay ceshato Neymar Jr” Halyeey kooxda Barcelona ah